Mmelite Federal & State Marijuana & Hemp - Akụkọ Ntanetị Cannabis
Akụkọ Cannabis Akụkọ Iwu - Wednesde @ 2:00 pm CST
Ọ bụrụ na ị na-achọ ebe ịchọta Akụkọ Cannabis Akụkọ Mmekọ - come bịara ebe kwesịrị ekwesị!
Dị ka ọrụ maka ikike dị elu, akụkọ ihe mere eme na ihe niile dị mma n'ụwa, onye ọka iwu nke malitere weebụsaịtị a tinye afọ ole nke ahụmịhe nke iwu azụmaahịa ka ọ rụọ ọrụ na inyere aka na mmejọ nke akụkọ ihe mere eme mgbe a bịara n'ịpụ cannabis.
Ọ malitere ọwa YouTube, Cannabis Legalization News, na 2018, yana weebụsaịtị a na omume iwu ya. Ya mere ọnwa ole na ole bidoro ịmachi - mana ugbu a, ya na ndị ahịa na ndị na-ege ya ntị, ọ na-eto n’ike ọsọ - ikekwe n’ihi na ọ na-enye gị ihe ị ga na-ele anya n’izu ọ bụla.
Wednesdaybọchị Wenezde ọ bụla na elekere abụọ nke ehihie na Oge etiti, onye ọka iwu Cannabis, Tom na onye nta akụkọ sitere WeedNews.Co, Miggy, zukọta iji kpaa izu maka Akụkọ Cannabis Akụkọ Mmekọ. Ha na-anabata ndị otu na mkpocha iwe cannabis iji kwurịta azụmahịa ha na mgbanwe mmezi iwu dị mkpa iji dozie afọ iri iwu ọjọọ. Ka anyị tụlekwuo - mana nke mbụ…
kpọtụrụ anyị Ndị ọka iwu Cannabis
Ọ bụrụ na ịchọrọ ito hemp na Illinois - mezue nkata bot na weebụsaịtị a - ma ọ bụ kpọọ ndị ọka iwu cannabis taa (309) 740-4033
Akụkọ Leg Leg ọhụrụ kacha ọhụrụ
Kwa izu, anyị na-amụgharị ihe agbadala na akụkọ banyere ịkwụsị mkpụrụ cannabis nke butere ọtụtụ nsogbu karịa ihe ọma karịa afọ 80 gara aga.
Ọ bụ nri ntanetị na Wenezdee ọ bụla na elekere abụọ nke ehihie - elekere etiti. Lelee anya na ndu ma juo ajuju gi ma obu kpoo okwu gi. Ọ bụghị naanị na ọ na-apụ ndụ na YouTube, kamakwa na Facebook. Yabụ, lee otu ị ga - esi enweta ya n'ụzọ dị mfe:
Denye aha ebe a:
Ma ọ bụ Dị ka anyị na Facebook ma lelee ya ka ọ biri na:
Ma ọ bụ nwere ike ịchọrọ ụdị PodCast:
Nke ahụ bụ n'eziokwu ihe niile ị ga - eme ka ị na - ele ikiri anya na-eme kwa izu ọ bụla. Inwere ohere iji gbaa ama akụkọ ihe mere eme - ọbụnakwa nyere ya aka site na itinye aka na mmebe iwu. Ma kedu ihe ị ga-atụ anya iji nweta ndenye aha gị - nke na-akwụghị ụgwọ ọ bụla - na Akụkọ Ntanetị Cannabis?
Na mgbakwunye na ndepụta akụkọ izu a, onye ọka iwu cannabis na-eme YouTubes n'ezie na iwu na ụkpụrụ cannabis. Karịsịa na ọkwa gọọmentị.
Nke a bụ ole na ole n’ime ndị o mere:
Iwu ikpe ikpe Marijuana nke 2019
O doro anya na a na-enyocha akụkọ 420 ihe karịrị narị abụọ kwa ọnwa - ọ bụrụ n’ịchọ okwu ahụ ma mechie ebe a - ịnabata, obi dị m ụtọ ịnwe gị.
Ọrụ anyị dị ebe a bụ ijide n'aka na ị nwetara akụkọ 420 gị - anyị na-ewere ozi a ka “nke ọma” karịa akụkọ na nyocha mgbe ọ na-agbanwe ịgbanwe iwu cannabis na United States na ụwa.
Akụkọ akụkọ 420 na-ezo aka n'akụkụ kachasị atọ ụtọ nke akụkọ cannabis. Mgbe ụfọdụ anyị na-atụle etu iwu ahụ nwere ike isi bụrụ ihe na-atọ ụtọ. Shopslọ ahịa cannabis na-arụ ọrụ nke na-eto ma na-ejere ọha mmadụ ozi.
Asọmpi cannabis ndị dị ebe ahụ na-akpọ ụdị nje kachasị.
Efu dị mma, mana ọ bụghị ihe dị mkpa dịka ihe na-aga enyere aka ịgbanwe iwu nke merụọla ọtụtụ mmadụ, mana enweghị nzọpụta. Nke ahụ bụ 420 News.
Ọ dị mma inwe n'ihi na ọ na-egosi akụkụ dị mfe nke ihe anyị na-achọ ime, mana imirikiti ọdịnaya anyị ga-abụ na ịgbanwe iwu na azụmaahịa na ụlọ ọrụ cannabis yana etu ha si eme na-emeziwanye ndụ na iwu niile. America, ma ụwa.
Nweta akuko si na Cannabis Legalization News
Ọ bụrụ na ịnọ n'ụlọ ọrụ cannabis - anyị ga-achọ ka mụ na gị kparịta ụka. Ka anyị kwuo okwu. Soro m na Linked'in
Ma ọ bụ jiri otu n'ime ọtụtụ kọntaktị ma ọ bụ bọtịnụ oku na ibe weebụ a iji sonye - ma eleghị anya, anyị ga - eme ka ị -
Akụkọ Ntanetị Cannabis!
Ọ bụrụ n’inweta ọdịnaya a, ma ọ bụ ịmara onye ga-enwe mmasị - biko tụlee ịkekọrịta.